बच्चाहरुमा गिजासम्वन्धि समस्याः कसरि बचाउने? – PerioNep
गिजासम्वन्धी समस्याहरु वयस्क मानिसहरुमा मात्रै हैन बच्चाहरुमा पनि देखिने गर्दछ। तर बच्चाहरुमा देखिने समस्या वयस्क मानिसहरुको भन्दा फरक हुन्छ। गिजासम्वन्धि समस्या मुख्यतया ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा हुन्छ। जसको कारणले गर्दा गिजा र दाँतलाई बाधेर राख्ने अन्य संरचनाहरुमा समस्या देखापर्दछ।
हरेक पटक खाना खाएपछि खाएको खाना दाँतमा टाँसिने हुन्छ। हामिले खाएको खाना दातको सतहमा एककिसिमको बलद्वारा टाँसिन्छ। दाँतमा सफा गरेको केहि सेकेन्डमा नै पातलो तह बन्दछ। यस प्रक्रिया २-४ घण्टादेखि सुरु भएर करिब ४ दिन सम्ममा दाँतबाट ननिस्किने दन्तेलेउमा परिवर्तन हुन्छ। यहि दन्तेलेउनै गिजा सम्बन्धिको समस्याको मुल कारण हो। यदि दन्तेलेउ समयमा नै हटाइएन भने करिब दुई हप्ताको अन्तरमा दन्तेपत्थरमा बदलिन्छ। जुन एकदमै कडा हुन्छ। उक्त पत्थर शरिरको बिभिन्न अङ्गमा हुने पत्थरि जस्तै हुन्छ। उक्त दन्तेपत्थरले अझै धेरै दन्तेलेउ जम्मा गराउन मद्दत गर्दछ। जसले गर्दा गिजाको संक्रमण देखा पर्दछ। बच्चाहरुमा देखिने गिजासम्बन्धि समस्याको प्रमुख कारण भनेको दन्तेलउ नै हो।
-दाँत र गिजाकोबिचमा अड्किने खानेकुराहरु
-मुखबाट सास फेर्ने समस्या, जसले दाँत तथा गिजालाई सुख्खा बनाउने गर्दछ
-पौष्टिक खानेकुराको अभाव
-शरीरमा भएका अन्य रोगहरु जस्तैः मधुमेह
-शरिरमा हुने हर्मोनको परिवर्तन
-दाँत किट्ने समस्या
-रातो भएर गिजा सुन्निनुको साथै मन्द गतिमा दुखाइको महसुस हुनु
-दाँत ब्रस गर्दा रगत आउनु
-गिजा दाँतको सतहबाट क्रमशः तलसर्दै जानु
-सामान्य तया भन्दा दाँतहरुबिचको दुरी बढ्दै जानु
-गिजा र दाँतको बिचबाट पिप आउनु
कसरि पत्ता लगाउने?
माथि लेखिएका लक्षणहरु देखिएमा सकेसम्म चाँडै दन्तचिकित्सक वा विषेशज्ञ चिकित्सकसमक्ष लगिहाल्नुपर्दछ। रोगसम्बन्धि सम्पुर्ण जानकारी लिईसकेपछि गिजासम्बन्धी समस्याको बारेमा जानकारी प्राप्त हुने गर्दछ। कुनै कुनै अवस्थामा एक्सरे पनि लिनुपर्ने हुनसक्दछ।
-सामान्य दाँतको सफाई
-डिप क्लिनिङः धेरै नै समस्या भएको खण्डमा गिजा भित्रैबाट जराको भाग सफा गर्नुपर्ने हुन्छ।
-पिप जम्मा भएको अवस्थामा औषधिको सेवन गर्नुपर्दछ।
-गिजाको आकार एकदमै बढेको अवस्थामा सर्जरि पनि गर्नुपर्ने हुनसक्दछ।
-दिनको दुईपटक उपयुक्त तरिकाको प्रयोग गरेर फ्लोराईडेटेड टुथपेस्टको सहायताले ब्रस गराउने।
-बच्चाको उमेर अनुसारको ब्रसको साइजको प्रयोग गराउने।
-दाँतको बिचमा फसेको फोहोर निकाल्नको लागि डेण्टल फ्लसको नियमित प्रयोग गराउने
-हरेक पटक खानेकुरा खाएपछि राम्रोसँग मुख कुल्ला गराउने
-नियमितरुपमा दन्तचिकित्सक वा विषेशज्ञ चिकित्सकसँग परिक्षण गराउने
-पौष्टिक खानेकुराहरु खुवाउने तर चिनिजन्य खानेकुराहरु कम खुवाउने
दाँत तथा गिजासम्बन्धि समस्याहरु मुख्यतया हामीहरुको हेलचेक्र्याईँको कारणले गर्दा हुने गर्दछ। त्यसैले आफ्नो बालबच्चाको मुख तथा दाँतसम्बन्धि स्वास्थ्यको बारेमा बेलैमा सचेत हुनुपर्दछ। रोग लागिसकेपछि उपचार गराउनु भन्दापनि रोग नै लाग्न नदिनु बुध्दिमानी हुन्छ। स्वस्थ रहौँ, खुसि रहौ, सुखी रहौँ।